के हो अपच ? यी हुन् अपच हुने ६ कारण - Health Today Nepal
के हो अपच ? यी हुन् अपच हुने ६ कारण
March 10th, 2019 स्वास्थ्य विशेष0comments
काठमाडौ,फागुनः शरिरको पाचन प्रणालीमा गडबडी भई खाना नपच्ने समस्यालाई अपच भनिन्छ। बेटाइम भोजन गर्ने र एउटा खाना नपच्दै अर्को खानेकुरा खाइयो भने राम्रोसँग पच्दैन। यस्तै कुनै बेला धेरै चिल्लो या मसलेदार खाना खानाले पनि अपच हुन्छ। तर यसबाहेक अन्य कारण पनि हुन्छन्। जसले अपचको समस्या ल्याउँछ।
भोक नलाग्ने, खुट्टा दुख्ने, छाती पोल्ने, पेट गह्रौं हुने तथा दैनिक दिक्क लाग्नेजस्ता समस्या आउँछन्। यसका साथै पसिना आउने तथा निद्रा नपर्नेजस्ता लक्षण पनि देखिन्छन्।
अपच हुनुका कारण
१.भोकभन्दा बढी भोजन
अचप हुनुको अर्को कारण हो– भोकभन्दा बढी भोजन गर्नु। भोक नलागी भोजन गर्नेले खाना राम्रोसँग चपाएर पनि खाँदैनन्। जसले गर्दा आमाशयले खाना पचाउन सक्दैन।
खाना खानेबित्तिकै सुत्ने गर्दा पनि अपचको समस्या आउँछ। जो भोजन गर्नेबित्तिकै सुत्छन् या बसेर काम गर्छन् उनीहरूमा पनि अपचको समस्या आउँछ। खानेबित्तिकै कुनै क्रियाकलाप नगरी बसेमा खाना पच्न पाउँदैन।
कलेजो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ। यो बिग्रियो भने शरीरको पूरै व्यवस्था प्रभावित हुन्छ। कलेजोसँग हाम्रो शरीरका अन्य क्रिया जोडिएको हुन्छ। यसले शरीरमा मेटाबोलिजममा रूपान्तरण गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ। यसका साथै मधुमेह र चिल्लोको नियन्त्रण पनि गर्छ। जसले गर्दा कलेजोमा समस्या आउँछ र अपच हुन्छ।
४.धूमपान तथा मद्यपान
धूमपान तथा मद्यपानले पनि अपचको समस्या आउँछ। यी अम्मलले खाना नलीको पछि ताप उत्पन्न हुन्छ। मद्यपान तथा धूमपानले पेटमा रसायन उत्पन्न गराउँछन्। जसले अपचको समस्या ल्याउँछ।
५.सानो आन्द्रामा किटाणु
सानो आन्द्रामा किटाणु भएमा पनि अपचको समस्या आउँछ। यद्यपि यस विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धानले कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन। तर कुनै पनि किटाणुको संक्रमण कुनै बेला अपचको कारण बन्छ। यसको हाइड्रोजन श्वास परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ।
कुनै औषधि यस्ता हुन्छन्, जसले अपचको समस्या ल्याउँछन्। जस्तोः दुखाइ नाश गर्ने बु्रफिन, एस्पिरिन, स्टेरायडलजस्ता औषधिहरूको सेवनले अपचको समस्या निम्त्याउँछ। यसकारण सकेसम्म यस्ता औषधि खानु हुँदैन।(एजेन्सीको सहयोगमा)
Previous article यी हुन् राजधानीबाहिरका बिरामी अस्पताल....
Next article ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग,एकल महिला र अनाथको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट
फूटबल हेर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक......
के हो क्यान्सर ? उपचार विधि र रोकथामका उपाय
विश्व स्तनपान सप्ताहः स्तनपान आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यको लागि राम्रो
Aug 25th 3:19 AM
मासु सेवनले मस्तिष्कमा आक्रामक एंव हिंस्रक प्रवृत्ति सिर्जना गर्ने
Aug 25th 2:40 AM
चितवनमा डेंगु परीक्षणको कीट अभाव
Aug 25th 2:25 AM
उपचारको क्रममा अस्पतालमै सुत्केरीको मृत्यु
Aug 24th 5:10 PM
ईशान बाल तथा महिला अस्पतालले मनायो २४ औं बार्षिकोत्सब
Aug 24th 3:03 AM
प्रदेश नं.३ का पाँच जिल्लामा पाँच सय ५८ जनामा डेंगुको संक्रमण
Aug 24th 2:44 AM
डेंगु नियन्त्रणका लागि २१ लाख रुपैँया बजेट
Aug 24th 2:27 AM
स्मरणशक्ति बढाउन के गर्ने ? यी हुन् ८ उपाय….
Aug 23rd 3:14 AM
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा, आजैदेखि स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै
© Health Today Nepal 2018. All rights reserved.